Xaafaddii Jajabka lagu jab! | isbeddel
← A tale of three islands
Somaliland…Waar illayn wareer badanaa! →
Xaafaddii Jajabka lagu jab!
Riwaayadda ay shicibku sheegayaan waa sidan:
“Saaka (shalay aroortii) ayaa kooxo ka mid ah booliska iyo ciidanka asluubta oo uu gadhwadeen ka yahay badhasaabka Gobolka Hargeysi hiirtii hore juq na soo yidhaahdeen! Waxbaba la isma weydiin eh mar qudha uunbaa cagafyo la geliyey guryihii aan deggenayn in ka badan labaatanka sano. Ballan ayaa annaga iyo dawladda noo taallay; in aan ka guurno dhulkan iyaguna ay noo diyaariyaan meel aan ubadkayaga iyo ooryahayaga ku asturanno. Markaannu nidhi waar sideed wax leedihiinna…hoo rasaasta ayaa la noogu jawaabay!”
Riwaayadda dawladduna sidan ayay leedahay:
“Shicibka deggan xaafadda Jajabka hore ayaan isu aragnay. Waannu wada hadalnay oo waxaan u sheegnay in halkan ay ka guuraan, dhul ay degaanna dawladda ku leeyihiin. Dhulkii dawladdu way u diyaarisay, lacag amba-bixin ahna way ugu dartay. Ballan ayaan qabsannay, markii wakhtigeedii la gaadhayna ballan fur ayaan shicibkii kala kulannay! Waxay soo saareen guddi ay yidhaahdeen way na metelaan oo masiirkayaga ayay meel ku tiirinayaan. Guddidii waxay codsadeen in qoys kasta la siiyo lacag u dhiganta mid guri lagu dhisto ($30,000)! Wada hadal dabadii in la raro ayay talo ku dhammaatay…taag darrada dhaqaale ee dawladdana waa la is xasuusiyey; dabadeed la isla gartay in sidaa lagu guuro. Saaka markii aan hawshii raritaanka bilownay, waxa booliskii lagala horyimid xabbad nool iyo madax adayg! Booliskuna wuu is difaacay; hawshiisiina waa gutay”.
Waxa la yidhi haddaan la kala roonaan roob ma da’o. Maahmaahdaasi waxay si buuxda u dabbaqaysaa aayad qur’aan ah: wajasaa’u sayi’atin sayi’atun misluhaa, faman cafaa wa aslaxa fa ajruhuu calallaah. Arritan foosha xun ee xaafadda Jajabka ka dhacday sidan uma ay dhacdeen haddii ay gacmo iyo garaaddo qummani maamulayaan. Laba ceebood baa is huwan: dad aan dawladnimo u bislayn oo saaqiday iyo dawlad aan xikmad lahayn dadaalkeeduna liito. Dabadeed waxa ka soo baxay geerida Maxamuud Iid, 23 jir jaamici ah, iyo dhaawaca afar qof oo midi gabadh uur leh tahay.
Maxaa arrinta gaadhsiiyey dhimasho…miyaan arrimo intan ka adag ba si nabad ah loo dhammayn? Maxaa keenay gulufka iyo isdhexyaaca la moodo xero qaxooti oo boob ka dhacay…miyaan Somaliland lagu majeeran jirin aragtida cusub ee ay u marto xallinta khilaafaadka iyo nabadaynta deegaankeeda? Ma caqlibaa in qof labaatan sano meel deggenaa la yidhaa hoo lacagta oo yaan halkaa lagugu arkin 24-saac gudahood…miyaan dadku lahayn carruur, weel, sariir, dhar, riyo, digaag iyo xamaan kale oo midkiiba u baahan yahay in la xidhxidho oo si taxaddir leh loo qaado? Ma caqlibaa gego bannaan oo dhaxan iyo boodh badan xamaantaada dhigo…miyaan dadku lahayn qof buka, qof da’ ah, mid dhallaan ah ama intaba? Maxaa dawladda u diiday in ay meesha dadka loo rarayo marka hore dhisto; dadka kala qorshayso dabadeed wakhti ku filan oo lagu guuro siiso? Maxaa dawladda ku khasbay in ay riddo xabbad wiil yar iyo islaan uur leh galaafata iyaga oo karaya in muwaaddinka oo qanacsan iskii u guuro?
Shicibku muu waashay? Miyaanay dawladnimo iyo kala danbayn baranayn oo aanay xaqooda iyo waxa xaqa loogu leeyahay kala saarayn? Yaa siiyay dhulkan ay qoryaha la dhex kuudadaan ee ay car naga kici leeyihiin? Miyaanay khajilayn marka ay guri dawladi marka horeba lahayd deggen yihiin ee weliba intaas oo sano aanay cidi la hadal maantana si waayeelnimo ah looga codsaday in ay ka baxaan si dhakhtar looga dhiso, dhul la siiyay lacagna loogu daray haddana ay afka taagayaan sidii wax qoorgooye hayo? Goormay dawladnimo iyo kala danbayn baran? Waa maxay waxan oo akhlaaq xumo ahi?
Haddaan la kala roonaan roob ma da’o…mase muuqato kala roonaansho iyo xikmadi toona. Ilaahay wiilkii dhintay ha u naxariisto; dawladdana dad u qalma ha innoogu dhiibo.
Posted by Warfaa on Oktoobar 31, 2011 in Uncategorized